Ukuba unikwe i-milk mushroom yaseTibet, ungancoma. Kukho umntu ophilayo ohlala endlwini, efuna ukunakekelwa rhoqo. Kodwa iinzame ezinjalo zifanelekile. Ngoncedo lobisi lwe-mushroom kefir lufunyenwe, luncedo kakhulu kwaye lunomsoco kubo bobabini kunye nabantu abadala.
I-kefir efunyenwe kwi-fungus yobisi iphathwa ngeentlobo ezahlukeneyo zezifo kunye nezifo zesisu, ezisetyenziswa njengophiliso lwelinxeba, i-antiseptic. I-Kefir isusa iisaliti zetsimbi ezinzima kunye neesxibisi ezisuka emzimbeni. Ingasetyenziselwa ukukhuluphala kunye neenjongo zokuzicoca. Kodwa apha uzisa lo mqondiso wamakhowe ekhaya lakho ...
Unokunyamekela njani i-mushroom yobisi lwe-Tibet?
I-strainer okanye i-colander yeplastiki.
Intonga yomthi okanye iplastiki.
Sebenzisa kuphela iiglasi kunye neeplastiki, kodwa kungekhona izitya zensimbi.
Beka i-fungus kwi-colander uze uyisuse phantsi kwamanzi apholileyo. Ukugubungela i-mushroom encinane kwi-colander okanye uphenduke ngentonga yeplastiki. Yenza le nkqubo malunga nomzuzu omnye.
Sebenzisa ubisi bemvelo (unxweme)
Faka i-mushroom ehlanjwe kwijeli yeglasi. Dlulela ngobisi, obusondelene nemvelo, kwaye kungengenxa yempuphu. Igalagi yobisi, 2 iisupuni zamakhowe. Ubisi kufuneka kube ngumxholo ophezulu okanye oqhelekileyo weoli.
Gubungela ingqayi ngejeyi
Ukumboza nge-gauze, ukubopha ngentambo okanye ukukhawuleza ngeqela elimhlophe. Beka ingcamango yezinto ezingenanto eceleni, maye eme kwindawo yokushisa, endaweni emnyama.
Ukunyamekela ukwahlula i-mushroom kwi-kefir
Ngosuku lwe-kefir lukulungele. Ukuba uthanda i-yogurt epholileyo, ke ugcine ixesha elingaphezulu kweeyure ezili-12, ukuba ufuna ngaphezulu nangaphezulu, ulandele emva kosuku olunye. Akukhuthazwa ukugcina i-yogurt kwisitya ngaphezu kwelanga.
Ukusela rhoqo i-kefir
Ukuze uhlule iziqulatho ezivela kwifungus, kufuneka uthathe i-strainer. Strain kefir uthele kwiglasi. Iya kuba ilungele ukusetshenziswa, kwaye uhlambe iifungus phantsi kwamanzi apholileyo, uze uhlambe intombazana. Emva kwenkqubo, iqoqo lama-mushroom lifakwe kwisitya, inxalenye yesibisi esingavumelekanga ithululelwa kuyo kwaye umjikelezo wonke uphinda uphinda kwakhona.
Izitya, apho i-mushroom izakufumaneka khona, akudingeki ukuba ihlanjwe ngamanzi athile, ukuze bangakwazi ukuhlala kwiitya.
Ukuba uthenge i-mushroom yaseTibetan, cela abantu abanokukunika imiyalelo enenkcukacha kunye nolwazi, ukuba kunokwenzeka. Ubuninzi bemiyalelo buya kugcina i-fungus ekufeni kwangaphambili kwaye igcine impilo. Ukulungiselela ukumnika, sebenzisa amanzi ahlambulukileyo. Ukwenza oku, sebenzisa amanzi adibeneyo okanye ucwecwe.
Inkqubo yokuvuthwa inokwenziwa kwinqanaba lefriji elingaphantsi kweemeko zokupholisa. Kulungeleka kakhulu, unokulungisa ixesha lokuvuna ubisi.
Iindlela zokupheka ezona zilungele ulusu lolutsha: zokupheka kwabantu
Ngaba kunokwenzeka ukwandisa isifuba ngaphandle kokuhlinzwa?
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-galena
Umlungisi wombala weenwele emva kombala
Iprogram ye-Meikap-zemfundo: izibhulu zincinci ezinhlanu zokwenza izinto
Intukuthelo, ifakwe kwindawo yokubilisa
Ziziphi iindlela zokukhulelwa ngokwezesondo ezingaqhelekanga?